गर्भावस्थामा उल्टी आउने कारण के ? – Online Bichar
गर्भावस्थामा उल्टी आउने कारण के ?
Online Bichar 16th January, 2018, Tuesday 11:32 PM
गर्भावस्थाको पहिलो त्रैमासिक (सुरुको १२ हप्तासम्म) मा गर्भवती महिला अस्पताल भर्ना हुनैपर्नेे कारणमध्ये अत्यधिक उल्टी आउनु पनि एक हो । योनीद्वारबाट रगत बग्नु, तल्लो पेट दुुख्नु, गर्भ तुहिनु, सेतो वा खैरो पानी बग्नु आदि चाहिँ अन्य कारण हुन् । धेरै वाकवाकी लागेको र उल्टी भएको महिलाको पिसाबमा ‘किटोन’ जाँचिन्छ । यदि पिसाबमा किटोन पोजिटिभ पाइए मुखबाट केही पनि खान नदिई भर्ना राखेर सलाइन चढाउनुपर्छ ।
बिरामी र कुरुवालाई अपर्झट भर्ना बस्नुपर्छ भन्दा उनीहरू असमञ्जसमा पर्छन् । राम्रोसँग परामर्श दिएपछि मात्र भर्ना बस्न राजी हुन्छन् । प्रसूति रोग विशेषज्ञहरूले बारम्बार यस्ता समस्या हेर्नुपर्छ । उल्टी आउने समस्यालाई कहिल्यै पनि हल्का रूपमा लिनुहुँदैन ।
गर्भवती महिलालाई ढाडस दिने, सुख्खा खानेकुरा खाने, चिल्लो पिरो कम खाने गरेमा यो समस्या कम हुँदै जान्छ । आवश्यक परेमा उल्टी नआउने औषधि खान सकिन्छ । प्रशस्त मात्रामा झोलिलो खानेकुरा (एकदिनमा दुई लिटर) एवं फलपूलको रस पिउनुपर्छ ।
यसका साथै भिटामिन बी कम्प्लेक्स र सी, बिरामीलाई ढाडस, बिरामीको श्रीमान् तथा परिवारजनलाई परामर्श दिनुपर्छ । उल्टी रोकिनु, बिरामीलाई भोक लागेको अनुभव हुनु, अनुहारमा चमक आउनु, पिसाबमा एसिटोन (अत्यधिक उल्टीका कारण देखिने खराब तत्व) हराउँदै जानु, बिरामीको नाडी, रक्तचाप, पिसाबको मात्रा सामान्य हुनु बिरामी सुधार हँुदै जानुको प्रमाण हो । उल्टी रोकिएपछि सुरुमा बिस्कुट, टोस्टलगायत सुख्खा चिज खान दिनुपर्छ । बिस्तारै सामान्य खानेकुरा ख्वाउन थाल्नुपर्छ । यस क्रममा थोरथोरै तर धेरै पटक ख्वाउनुपर्छ । यसको अलावा गर्भावस्थासँग असम्बन्धित तर गर्भवती बेलामा हुनसक्ने उल्टी तथा गर्भावस्थाको अन्त्यतिर देखापर्ने उल्टीका लागि कारक तत्वअनुसार नै उपचार गराउनुपर्छ ।